Kwii-shelves zezitolo zokutya iindawo ezikhethiweyo zokutya kunye neentlobo ezahlukeneyo zokutya. Xa sifuna ukutya okuhlwayileyo, sihlala sikhohlwa ukuba sifunde malunga nezinto ezinobungozi zomkhiqizo, kwaye oku kuphosakeleyo, kuba siquka oko sikudlayo.
Kule ngcaciso, iimveliso ezinobungozi kakhulu zinikezelwa, esizithengayo yonke imihla. Nangona kunjalo, ukhetho lenu - ukuba niyidle okanye niyeke.
Nangona kubakho ukuhlala rhoqo kwamazwi "i-100% yemvelo, ayinayo i-GMOs" kwintengiso yeemveliso zenyama, yonke into ayifani nebalabala, njengoko sitshoyo. Kwi-90% yale mikhiqizo ayikho inyama yangempela, kwaye phantsi kohlobo lwayo kwengeza izidumbu ezahlukahlukeneyo: isikhumba, amathambo aqhekekileyo, i-giblets, njl., Kwaye le nkunkuma kwi-sausages kunye ne-sausage i-10% kuphela. Zonke ezinye zithathwa ngumgubo, izilondolozo kunye nokuphucula i-flavour, isitashi nezinye izithako. Ukutya okunjalo kunokubangela iingxaki ngokugonya, kunye nokuvinjelwa ukuba ukhulelwe, unesi kunye nabantwana abancinci: izinto ezinobungozi zingabangela iingxaki kwi-thyroid gland, i-gall bladder, neentsholongwane.
Sisoloko sichazwa ngomphumo onobungozi we-soda kumabonwakude kwaye kubhaliwe kumaphephancwadi ahlukeneyo, kodwa bambalwa abantu bathatha eli ngcebiso ngokucokisekileyo. Nangona kukho inkcazo emnandi kunye nentengiso enhle, iziphuzo ezinomlilo azizenzi naluphi na uncedo emzimbeni wethu, nangona kunjalo. Ngokomzekelo, kwisiselo esisodwa "iKola" iqulethe:
Aspartame. Lo mnqweno owenzelayo awuvumeli ukuba ucime ukoma kwakho, kodwa kubangela ukuba unomnqweno omkhulu wokusela. Kwakhona kuyingozi kumzimba womntu: le nto igalelo ekuphuhliseni ubuchopho kunye ne-oncology yesibindi, ichaphazela kakubi iintsholongwane, ibangele iindlala ezininzi kunye nokulala.
Caffeine. Le nkunkuma inokunyusa uxinzelelo lwegazi, kubangela ukulala, ukuphazamisa intliziyo. Kwakhona kuyingozi kwinkqubo yesantya yomntu.
Phosphoric acid. Iyakwazi ukukhipha i-calcium emzimbeni kwaye ukwandise izinga le-asidi kulo.
Kanye kunye nezinye izithako, olu lwakalo lubulala nje umzimba womntu ngaphakathi.
I-jelly izithelo, i-candies, i-tshokoleta
Ezi ncinane kunye ezingenabungozi ekuqalekeni iipesele zingabangela iingxaki ezifana nalezi: i-caries, izilonda, isifo sikashukela kunye nokukhuluphala. Zonke ezi zidliwayo zilungiselelwe ngokudibanisa kwenani elikhulu lemibala yokufakelwa, i-acidity regulators kunye ne-sweeteners. Ukubunjwa okunjalo kunokukhuphaza nokuphuhliswa kwezifo zesifo. Inyaniso: ukuba uthabatha yonke idumiweyo "Barbarisk", umxube omncinci ngamanzi uze uyishiye kwinqatyambo yakho yetafile, ngoko kwiiyure ezimbalwa umgama owenziwe kwintsimbi: ngenxa yokuxinwa kweekhemikhali, loo candy inokutshabalalisa iiplastiki. Akunzima ukuqiqa ukuba kuya kuthinta njani isisu.
I-Ketchup, i-mayonnaise, nezinye i-sauces
Akufanele uthembele abantu abathi i-ketchup yenziwe kwiitamatisi ezitsha, kwaye i-mayonnaise iqukethe iiqanda zasekhaya ezinkukhu. Enyanisweni, i-ketchup isekelwe kwi-tomato yokunamathisela, kwaye i-mayonnaise ithatyathelwa ngamanqaku afanelekileyo esikhundleni samaqanda. Ngokwakheko, iisobho ezininzi ziqulethe isamba esikhulu seshukela okanye isitrasi esikhundleni, i-flavor enhancer, iviniga, i-trans oil, i-preservatives. Ezi zixhobo zichaphazela kakubi isondlo sesisu kunye nokubulala ama-enzymes asebenzisekayo, kunye nokukhupha isifo sikashukela, isifo sofuba nomhlaza. Ukuba awukwazi ukuyidla ngaphandle kweesukisi kunye neezongezo ezahlukeneyo, kungcono ukuwapheka ekhaya: oku kuya kunciphisa umngcipheko wokusebenzisa iimveliso ezinobulunga.
Caviar enomsolo ococekileyo kunye neengca
Iimveliso ezinjalo zinomphefumlo omfutshane kwaye zimele zigcinwe kwioli, kungekhona kwiwayini okanye kwi-essence. Ukugcinwa ixesha elide, i-urotropine, okanye i-E239, yongezwa kwisisombululo. Le nkunkuma inefuthe elibi kakhulu kubantu: idlula ngeentso, ukwakheka kwe-formaldehyde eyenzekayo, eyenza i-denaturation (ishintsho) yeeprotheni. Kwakhona, i-urotropine iyabangela ukuba kubonakale ukubonakala kwamagciwane. Ukuba uhlala usebenzisa iimveliso ezinjalo, unako ukufumana isifo sohudo okanye ukugula.
Yintoni enokunika abantwana esikolweni kunyaka omtsha
Iingcebiso zokugcina imali
Ukulondoloza uhlahlo lwabiwo-mali
Isaladi kunye ne-avocado kunye neentlanzi ebomvu
Ukulahla amanqatha nge-jamberry jam
Indlela yokubhiyozela i-Halloween kwisikolo esikolweni kubafundi besikolo esiphakamileyo, ividyo. Ukulungelelana ngezandla zakho zesikolo iHalloween
I-TEXT: Iseshoni yesithombe eshukumisayo seDarya Pynzar kubangele ukungqubuzana kwi-Instagram
Intliziyo yenkukhu ethosiweyo
Ulwakhiwo kunye nesakhiwo seenwele
Isidlo sasekuseni esilungileyo nesempilo
Jam ukusuka kumanzi-melon